Nabaddoonada gobolka Mudug,” Reer guuraaga Galmudug kasoo hayaamaya wax hub ah lamasoo geli karaan gudaha Puntland.’ | puntlandi.com
Nabaddoonada gobolka Mudug,” Reer guuraaga Galmudug kasoo hayaamaya wax hub ah lamasoo geli karaan gudaha Puntland.’
Nabaddoonada iyo cuqaasha Puntland ee gobolka Mudug ayaa faray reer guuraaga kasoo hayaaamau deegaanada koonfurta Mudug iyo Galmudug ee maamulka Galmudug inaysan wax hub ah lasoo geli karin gudaha Puntland.
Go’aankaan ayaa qeyb ka ah sharuudo waxgaradku hordhigay odayaasha Galmudug ee ka qeyb galaya shirka nabada Gaalkacyo ee waayahaan ka socday Hotel Jazeera ee Gaalkacyo.
Nabadoonada iyo waxgaradka Puntland waxay sheegeen dowladda Puntland inay damaaqaadayso ammaanka reer guuraaga, iyagoo sheegay go’aankaan ku saabsan inaan hub lalasoo gelin Puntland inuu yahay mid looga hortagayo isku dhac maadaama shacabku hubaysan yahay.
Qodobada kale ee la hordhigay odayaasha Galmudug waxaa kamid ahaa inaysan deegaan rasmi ah ka dhigan dhulka loo fasaxay inay xoolahooda daajiyaan, maadaama aan la is dhexgali karin inta colaada la yahay. Sidoo kale waxaa kamid ah inaan lagu ixadgudbin deegaanka iyo si sharuud la’aan lagu furo wadada laamiga ah ee u xiran Galmudug.
Odayaasha Galmudug waxaa laga sugayaa jawaabta arrintaan, laakiin reer guuraagooda si sharuud la’aan ah ayaa loogu fasaxay inay usoo gudbaan dhinaca Puntland.